थपिए ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट तत्कालिन मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट क्याविनेट मन्त्री छैन । – Radio Hatemalo FM
थपिए ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट तत्कालिन मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट क्याविनेट मन्त्री छैन ।
प्रकाशित मितिः २ चैत्र २०७४, शुक्रबार १९:५० March 16, 2018 हातेमालो संवाददाता
थपिए ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री, टीम ओलीमा को को परे ?
चार राज्यमन्त्री पनि नियुक्त भएका छन् । यससँगै ओली सरकार २२ सदस्यीय बनेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु सपथ लिएका छन् । लगतै राज्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सपथ लिएका छन् ।
को बने मन्त्री ?
ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बनेका छन् । उनी एमाले सचिव पनि हुन् । अर्का सचिव गोकर्ण विष्टलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । शुक्रबार मात्र महिला बालबालिकाबाट फुटाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको थियो । यस्तै रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन, रघुवीर महासेठ भौतिक पुर्वाधार, शेरबहादुर तामाङ कानुन र जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बनेका छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बन्दा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै चक्रपाणि खनाल कृषि तथा शहकारी र विना मगर खानेपानी मन्त्री बन्ने भएकी छन् ।
तत्कालिन मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट नेकपा एमालेबाट एक जना पनि क्याविनेट मन्त्री परेका छैनन । वि.सं. २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका धनबहादुर बुढा भने राज्य मन्त्रीमा परेका छन् ।
पुल निर्माण गर्न डिपीआर पक्रिया सुरु
नेपालगन्जमा कैदीबन्दीले प्रहरीको आँखामा खुर्सानीको धुलो फालेर भाग्ने प्रयास
चैत्र ३ गतेदेखि हुनेभनेको फुटबल खेल स्थगित